प्रकाशित : 9:23 am, बुधबार, असोज ६, २०७८
काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपलिका समस्या नै समस्याले ग्रस्त छ । धेरै समस्या मध्ये पार्किङ् पनि काठमाडौं महानगरको एक प्रमुख समस्या हो । सवारी साधनको अत्याधिक चाप व्यवस्थापन हुन नसक्दा सामान्य जीवनपद्धति र सहरी सुविधाको उपलब्धतामा नै समस्या भएको छ ।
सवारीसाधन पार्किङ् समस्या भएपछि लामो समयदेखि प्रविधिमा आधारित समाधान हेरिरहेको महानगरले २०७६ सालको सुरुआतसँगै कामपा भित्रका विभिन्न ठाउँमा स्मार्ट पार्किङ्को योजना अघि सारेको थियो ।
तर, स्मार्ट पार्किङ्को योजना अघि सारेको दुई वर्ष बितिसक्दा पनि कामपा भित्र पार्किङ्को समस्या समाधान भने हुन सकेको छैन । उपलब्ध स्थानको अधिक उपयोग हुने गरी पार्किङ योजना अघि बढाएको कामपाको योजना अनुरुप उपलब्धी भने शून्य छ ।
काठमाडौं महानगरले २०७६ सालको नयाँ वर्षसँगै ह्विल्स ट्रली योर्स प्रालिसँगको सहकार्यका स्मार्ट पार्किङको योजना अघि बढाएको थियो तर काम भने कुनै देखिएको छैन ।
मापदण्ड विपरीत व्यवसाय संचालन हुँदा मूकदर्शक
कामपाले पार्किङ समस्या समाधानको लागि ठूला महल तथा सर्पिङ कम्प्लेक्सलाई अण्डर ग्राउण्डमा अनिवार्य पार्किङ बनाउन भनेको थियो । तर कामपामा यस्ता धेरै मल तथा भवनहरु छन् जसको अन्डरग्राउण्डमा पार्किङ नभएर रेष्टुरेन्ट तथा बार संचालनमा छन् ।
पार्किङस्थल भनेर बनाइएका ठाँउमा समेत खुलेआम व्यापार व्यवसाय संचालन भइरहँदा समेत महानगर भने मूकदर्शक बनेको छ । आफैले तोकेको मापदण्ड कार्यन्वयन गराउन चुकेको महानगर त्यस्ता व्यापारिक भवनको समेत नक्सापास गर्ने गरेको छ ।
काठमाडौंको मुटु भनेर चिनिने दरबारमार्गमा बनेको नयाँ वान दरबार मलमा जान सडकमा सवारी पार्किङ गरेर जानुपर्छ । यस मलको पार्किङस्थल भनेर बनाइएको अण्डरग्राउन्ड रेष्टुरेन्ट लयायत व्यवसाय संचालन भइरहेको छ । तर महानगरको भवन निर्माण तथा मापदण्ड विपरीत पार्किङरहित यो भवनको महानगरले नक्सापास गरेको छ ।
पार्किङस्थल भनिएको ठाउँमा खुलेआम व्यापार व्यवसाय संचालन भइरहे भने कामपा भने यस बारे अनभिज्ञ नै छ । महानगरले तोकेबमोजिम मापदण्ड लागू नभएको उक्त व्यापारिक मलको चेकजाँचै नगरी नक्सापास दिएको देखिन्छ ।
कामपा यस्ता भवनमाथि न कुनै अनुगमन गरेको छ, न कुनै कारबाही नै । मुख्या ठाउँमै पार्किङ समस्या हुँदा पार्किङलाई बनाइएको स्थानमा व्यवसाय संचालन हुँदा समेत मूकदर्शक बनेको महानगर कतै आफैले मौन स्वीकृति त दिएको छैन ?
मापदण्ड विपरीत कार्य भएका भवनहरुको अनुगमन गरी कारबाही गर्नुको सट्टा महानगर भने अबदेखि त्यस्तो नगर्न सम्झाएको बताउँछ । ‘कामपा भित्र बनेका धेरै भवनको अन्डर ग्राउण्डमा पार्किङ नभएको पाइएको छ, त्यस्ता भवन निर्माण गर्नेहरु मापदण्ड अनुसार पार्किङ निर्माण गर्न भनेर सम्झाएका छौं । ठूलो भवन तथा महलको अन्डर ग्राउण्डमा अनिवार्य पार्किङ राख्नुपर्ने नियम नै हो, पार्किङरहित भवनलाई नक्सा पास दिएका छैनौं,’ चाणक्य पोष्टसँग प्रवक्ता डंगोलले भने । तर, नियम विपरीत बनेका यस्ता भवन संचालकलाई के सजाय गर्ने कुनै मापदण्ड भने कमपासँग छैन ।
महानगर भित्र जम्मा ३०० सवारीसाधन अट्ने पार्किङस्थल
काठमाडौं महानगर सबैभन्दा पुरानो महानगर हो । तर, समस्या नै समस्या ग्रस्त महानगरमा कतैै सवारीसाधन पार्किङ गर्न खोज्नु भयो भने कतै ठाउँ पाइँदैन ।
‘कामपामा पार्किङको ठूलो समस्या छ हामी पार्किङ समस्या समाधान गर्न लागि परेकै छौं, तर सोचे अनुरुप प्रतिफल भने प्राप्त गर्न सकेका छैनौं,’ कामपा प्रवक्ता ईश्वरमान डंगोलले चाणक्य पोष्टसँग भने । डंगोलका अनुसार कामपा भित्र जम्मा ५ वटा मात्र पार्किङ स्थलहरु छन् ।
विशाल बजार, न्यूरोड, दरबारमार्ग लगायत कामपाका ५ स्थानमा पार्किङ स्थलहरु छन् । डंगोलका अनुसार ती पाँच पार्किङ स्थलमा दुईपाँग्रे र चार पाँग्रे गरेर कुन ३ सयमात्र सवारीसाधन पार्किङ गर्न सकिन्छ ।
विगत दुई वषदेखि स्मार्ट पार्किङको कुरा उठाई रहनु भएको छ काम भने शून्य छ के कति काम भए भन्ने प्रश्नमा डंगोल भन्छन् । ‘ हामीले इलेक्टोनिक बिल्डिङ र पार्किङ छ कि छैन भलेर बुझेर आउन सक्ने व्यवस्था र पार्किङको सुरक्षाको मात्र व्यवस्थासँगै अस्तव्यस्त भएर पार्किङ गरेका सवारी साधान निकाल्न समस्या हुन्थ्यो, त्यसको पनि सहज व्यवस्थापनको वातावरण बनाएका छौं ।’
मेयरको कुरा ठूला, काम शून्य
महानगरमा मेट्राेरेल, मोनोरेल संचालन गर्ने जस्ता महत्वकांक्षी भाषण ठोक्ने मेयर विद्यासुन्दर शाक्यको कामको उपलब्धी भने शून्य जस्तै छ । रेलको कुरा त परै भयो महानगर भित्रको अस्तव्यस्त पार्किङलाई व्यवस्थित गर्न उनको कर्म शून्यप्रायः देखिएको छ ।
‘काठमाडौं सहरको चरित्र, सरल उपयुक्त र दिगो तथा प्रयोगकर्ताको आवश्यकता पूरा गर्ने पार्किङ व्यवस्थापनमा मेरो प्राथमिकतामा छ, पार्किङलाई सहज बनाउन सकियो भने मात्र पनि सहरको यातायात प्रणालीमा ठूलो सुधार हुनेछ,’ भन्ने मेयर शाक्यको बोली र व्यवहार भने नितान्त फरक छ । उनले बोलेका प्राय कुनै काम कुरा सफल भएका छैन्न ।
दुई वर्ष अगाडि नै नयाँ सडकको रामेश्वर मिठाई पछाडिको भाग, विशाल बजार अगाडि इन्द्रचोक जाने सडक, धर्मपथ, पाको र आरबी कम्प्लेक्स अगाडिको स्थानमा स्मार्ट पार्किङ शुरु हुने बताइए पनि काम भने हुन सकेको छैन । यी स्थानमा एकपटकमा करीब ८०० वटा मोटरसाइकल र ४० वटा गाडी पार्किङ गर्न सकिने बताइएको थियो ।
यी बन्ने भनिएका पार्किङस्थलमा सवारीधनीले मोबाइलबाटै रियल टाइममा कुन ठाउँ खाली छ भनेर हेर्न र पार्किङ गर्ने ठाउँ बुकिङ गर्न सकिने छ । ठाउँ रिजर्भ नगरी पुग्नेले अगाडि राखिएको स्क्रिन हेरेर पार्किङ गर्ने ठाउँ हेर्न सक्ने गरी कामपाले स्मार्ट पार्किङको योजना अघि सारेको थियो ।
« साहस ऊर्जाको आइपीओ खुल्यो, कति कित्ता भर्ने ?
रुरु जलविद्युतको लाभांश पाउन सेयर किन्ने आज अन्तिम दिन »